Uthotho lwemifanekiso ngezilwanyana ezenziwe ngepeni emnyama | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo besine uthotho olukhulu lwemizobo ephefumlelweyo kwiseti elungileyo yezilwanyana ukuba ibonakaliswe ngohlobo lokuba isiqingatha semizimba yabo senziwe ngeepoligoni. Olu dibaniso lukhokelele kuthotho lwekhwalithi ephezulu njengoko ubona kolu ngeno apho sabelana ngayo nani nonke enisifunda mihla le.
Ngoku sibuyela kwisitayile esinye somzekeliso, nangona ngaphandle kokudlala ngokwahlukileyo ngemifanekiso ethile yegcisa uAlfred Basha. Umzobi odibanisa ngempumelelo indalo kunye nezilwanyana ukwenza indibaniselwano enobungangamsha, mhlawumbi engcono kwezinye iziqwenga kunezinye.
Ndiziva ndikhululekile ukuzinikela kumnyama nomhlophe nakum owam umsebenzi, ukukwazi ukujonga ukukhanya okumnyama kuzo zonke iintlobo zemizobo kuthanda ukubalasela. UBasha ulandela isikhokelo esinye sokusazisa kuthotho lwezilwanyana ezinxulumene kakhulu nezo sizakufumana kumahlathi aseYurophu.
Ukusuka kwibhere ukuya kwi-squirrel, Ukusuka kwingcuka ukuya kwimpungutye elele kakuhle ithatha ikhefu elincinci.
Omnye izidalwa eziguqukayo ezidibanisa ezona ndawo zibajikelezileyo ukuze babe ngabona bantu baphambili emsebenzini omkhulu owenziwe ngepeni emnyama. Ayichukumisi nje intonga yezilwanyana esinokuyibona kwezona ndawo zininzi zaseYurophu, kodwa iya kweleenjiko okanye endle ngakumbi ngaloo tiger ebonakala kweminye yemifanekiso abelana ngayo kwi-Instagram yakhe.
Umsebenzi olungileyo kunye iziphumo ezingcono ngezilwanyana ezithile ngelixa kwezinye inokuhlala iyinto engaphezulu. Ungamlandela ukusuka I-instagram yakhe Ukwazi ukuthanda kwakhe izinto ezimnyama / ezimhlophe, izilwanyana kunye nokudityaniswa kwazo zombini ezibonisa kamnandi phantse yonke imihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Uthotho olukhuthazayo lwemifanekiso yezilwanyana eyenziwe ngepeni emnyama